Isikole samukele umnikelo wakwa-Samsung | News24
Isikole samukele umnikelo wakwa-Samsung
UMeya waseMandeni uMnuz Siphesihle Zulu ebonga abakwa Hesto Harnesses nabakwa Samsung abanikele ngama-computereSiyavikelwa Primary School ngoLwesihlanu oledlule. ISITHOMBE: sithunyelwe
ABAKWA-Hesto Harnesses bebambisane nabakwa-Samsung banikele ngama-computer eSiyavikelwa Primary School ngoLwesihlanu odlule.
USekela kathishanhloko uMnuz Vivian Mkhwanazi, ubonge abakwa Hesto Harnesses nabakwa Samsung ngalo mnikelo.
Uthe: “Kuyangijabulisa ukuthi iphupho lami lokubona isikole sethu siba nama-computer selifezekile. Lama-computer azothuthukisa imfundo yabantwana bethu,” kusho uMnuz Mkhwanazi.
Uqhube wathi lama-computer ngeke agcine ngokubaw usizo kubafundi base Siyavikelwa kuphela, kodwa nezingane zomphakathi wase zizonikezwa ithuba lokuwasebenzi uma zifisa ukwenza umsebenzi wazo wesikole.
Okhulumela abakwa Hesto Harnesses, uMnuz Sbu Ngcobo uthe lo mnikelo ukhombisa ukuthi abakwa Hesto bazi bophezele ekubambeni iqhaza ekuthuthukisweni kwemfundo yezikole zakulesi sifunda.
UMnuz Ngcobo ukhale ngezinga labafundi abaphumelela kumatikuletsheni ngonyaka odlule. Uthe izinga lemfundo ezikoleni zaseNingizimu Afrika liphansi.
Uqhube ngokunxusa othisha, abafundi nabazali ukuba benakekele lama-computer.
Ekhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnuz Thulani Mfusi uthe umnyango uhlangabezana nezinkinga ezahlukahlukene uma kumele kufakwe ama-computer ezikoleni.
Uthe inkinga enkulu wukuthi uma ama-computer esefakiwe ezikoleni ayantshontshwa. Uthe enye inkinga wukuthi i-internet ayitholakali kahle kwezinye izindawo. Inkinga yesithathu uthe wukuthi abafundi abawasebenzisi ngendlela efanele ama-computer kanti enye inkinga uthe ukuthi othisha abaqeqeshekile ngokwanele uma kuza ekufundiseni ngama-computer.
UMeya waseMandeni uMnuz Siphesihle Zulu unxuse umphakathi ukuthi ubambisane uma kuza kwezemfundo